Cambaareynta Qaraxii Hotel Central ee ka dhacay Muqdisha. - Anti Tribalism Movement : The ATM
In ka badan 20 sano ayaa dalka Soomaaliya waxaa ka jiray dagaalo sokeeye oo sababay dil, dhac, boob, qax iyo burbur saameeyay guud ahaan qeybaha kala gedisan ee bulshada Soomaaliyeed. Waxaa la soo maray waqti adag oo boqolaal kun oo Soomaali ah u horseeday inay u qaxaan dalka dibaddiisa.
Iyadoo ay taasi jirto ayaa shacabka Soomaaliyeed waxa ay mar waliba yihiin dad qaba ama ku nool rajo wanaagsan oo ah in la helo nabad, cadaalad, sinaan iyo amni buuxa. Sanadihii tegay ayaa waxaa isbadal laga dareemayay gudaha dalka isla markaana ay jiraan ganacsato Soomaali iyo Ajaaniib ah oo maal-gashi ku sameynaya mashruucyo kala duwan oo laga hirgalinayo gudaha dalka.
Waxaa jirta khatar xoogan oo saameyn weyn ku leh deegaanada iyo gobolada dalka oo qaarkood laga dareemayo amni darro iyo qalalaaso siyaasadeed. Deegaanada qaar ayaa waxaa ku sugan Ururka Al-Shabaab oo wada dagaal ka dhan ah dowladda Soomaaliya. Waana urur sheegtay mas’uuliyadda in badan oo ka mid ah weerarada iyo qaraxyada ka dhacay dalka Soomaaliya, oo uu ka mid ahaa qaraxii dhacay maalinimadii Jimacaha 20kii February 2015 oo ahaa qarax is-miidaamin ah oo lala beegsaday Hotel Central ee ku yaala caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisha.
Waxaa qaraxa ku dhintay in ka badan 25 qof oo ay ku jireen qaar ka mid ah xubnaha Baarlamaanka dowladda Soomaaliya iyo mas’uuliyiin kale. Waxaa sidoo kale qaraxa ku dhaawacmay xubno ka tirsan Golaha Wasiirada ee dowladda Soomaaliya iyo siyaasiyiin kale.
Dhallinyarada Kacdoonka Ka Soo Horjeedka Qabyaaladda (Anti – Tribalism Movement) waxa ay cambaareynayaan qaraxaas is-miidaaminta ah ee lagu weeraray Hotel Central. Waxaan aaminsanahay in xalku uusan ku jirin in la daadiyo dhiiga dadka Soomaaliyeed. Waxaan tacsi u direynaa ehelada dadka geeriyooday, Illaahayna ha caafiyo dadka kale ee ku dhaawacmay qaraxaas, Aamiin.
Waxaan mar waliba diyaar u nahay sidii aan kaalin buuxda uga qaadan laheyn dib u heshiisiinta dadka Soomaaliyeed, horumarka dalka, hirgellinta addeegyada bulshada, wacyigallinta qeybaha kala duwan qaas ahaan dhallinyarada oo ah mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed.
Waaxda Warbaahinta Kacdoonka